February 2020 – " कञ्चनजंगा News "
सुपा देउरालीको दर्शन गर्दै भोलि फाल्गुन १८ गते आइतबारको राशिफल पढ्नुहोस् ! भेटि स्वरूप एक एक शेयर गरौँ
No Comments on सुपा देउरालीको दर्शन गर्दै भोलि फाल्गुन १८ गते आइतबारको राशिफल पढ्नुहोस् ! भेटि स्वरूप एक एक शेयर गरौँ
माया प्रेममा अबिस्वास बढ्ने तथा बिपरित लिङगदेखि टाडै रहनुहोला । पढाई लेखाईमा खर्चिएको समय कम हुँने हुँनाले अरुभन्दा पछि परिनेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला अप्रिय घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न । व्यावसायिक तथा पर्यटकिय यात्रा गर्न सकिने भएपनि गन्तब्यमा पुग्नु अगावै बिभिन्न किसिमका बाधा तथा अवरोधहरुको सामना गर्नु पर्ने हुँन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
No Comments on तपाईंको फेसबुक अकाउन्ट अरूले खोलिरहेको त छैन ? यसरी लगआउट गर्नुहोस्
यदि तपाईंले कुनै साइबर क्याफे वा अरू कसैको डिभाइसमा लगइन गरेको आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट लगआउट गर्न बिर्सनुभयो भने त्यसको नतिजा दुखद् पनि हुनसक्छ ।
तपाईंको फेसबुक कुनै अनधिकृत व्यक्तिले चलाउने, दुरूपयोग गरी विभिन्न अनावश्यक पोष्टहरू गर्ने तथा पासवर्ड पत्ता लगाएर ह्याक गर्ने जोखिम पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ तपाईंले लगआउट गर्न भुलेको तपाईंको फेसबुक अकाउन्ट अर्को मान्छेले चुपचाप हेरिरहेको र तपाईंको जासूसी गरिरहेको पनि हुनसक्छ ।
यस्तो डरबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले फेसबुकमा रहेको एउटा फिचरको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ ।
उक्त फिचरको सहयोगले तपाईंले कहाँ–कहाँ आफ्नो फेसबुक लगइन गर्नुभएको छ र कुन डिभाइसमा अहिले सम्म पनि लगआउट भएको छैन भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । साथै एक क्लिकमै ती सबै डिभाइसबाट आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट लगआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
– स्मार्टफोनमा रहेको फेसबुक एपमा आफ्नो फेसबुक लगइन गर्नुहोस् र सेटिंग्समा जानुहोस्
– त्यहाँ रहेको सेक्योरिटी अप्सनमा जानुहोस् र त्यसभित्र रहेको सेक्योरिटी एण्ड लगइन नामक अप्सनमा ट्याप गर्नुहोस्
– त्यहाँ तपाईंले Where you are logged in नामक खण्ड देख्नुहुनेछ । त्यसमा तपाईंले आफ्नो फेसबुक लगइन भएका सबै डिभाइसको सूचि देख्नुहुनेछ ।
– यदि ती डिभाइसमध्ये कुनै डिभाइसमा तपाईंको फेसबुक अहिलेपनि लगआउट भएको छैन अर्थात् एक्टिभ छ भने त्यहाँ रहेका तिनवटा थोप्लाको चिन्हमा ट्याप गरी एक एक गरेर लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ ।
– यदि सबै डिभाइसमा एकैचोटी फेसबुक लगआउट गर्न चाहनुहुन्छ भने Log out of all sessions अप्सन छान्न सक्नुहुन्छ ।
· वेब ब्राउजरमा फेसबुक खोलेर आफ्नो अकाउन्टमा लगइन गर्नुहोस्
· टप ब्यानरमा रहेको ड्रपडाउन एरोमा क्लिक गरी Settings अप्सनमा जानुहोस्
· सेटिंग्स पेजभित्र बायाँ भागमा Security and Login अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्
· त्यसपछि Where you are logged in खण्डमा क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाइँको फेसबुक अकाउन्ट लगइन भएका सबै डिभाइसको सूचि देखिन्छ ।
· ती सबै डिभाइसबाट तपाइँले एकएक गरी वा एकैपटक लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ ।
बिबाहले मेरो करिअ’रलाई अ’सर गर्ने छैन : रविना थापा
No Comments on बिबाहले मेरो करिअ’रलाई अ’सर गर्ने छैन : रविना थापा
चलचित्र ‘लभ डायरिज’बाट चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी नायिका हुन्, रुविना थापा । मोडलिङ क्षेत्रबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी रुविनालाई पहिलो चलचित्रले व्यापारिक सफलता भने दिएन । तर, आफ्नो काम र आफ्नो कामले पाएको प्रशंसाबाट भने रुविना खुसी छिन् ।
चलचित्र हेर्ने दर्शकले चलचित्र र आफ्नो कामलाई राम्रो प्रतिकृया दिएको रुविना बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘चलचित्र आफैँमा राम्रो बनेको थियो । जतिले हेर्नुभएको छ, उहाँहरुले हाम्रो अगाडि आएर राम्रो नै भन्नुभएको छ । मेरो कामको पनि प्रशंसा नै भइरहेको छ । खुसी लाग्छ ।’
चलचित्रमा आफूले गर्न पाएको भूमिकाबाट पनि रुविना सन्तुष्ट छिन् । दुई अभिनेताको बीचमा रहेर काम गर्दा पनि आफ्नो भूमिका नै सशक्त भएको रुविनाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘मैले दुई हिरोको बीचमा परेर हराउनु परेन । मेरो क्यारेक्टर निकै बलियो थियो । त्यसैले पनि मलाई दर्शकले नोटिस गर्नुभएको जस्तो लाग्छ ।’
रुविना करिअर निर्माण पूर्ण रुपमा एउटै चलचित्रले नगर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘कुनै पनि चलचित्रले कलाकारलाई स्थापित गराउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । म चिनिने भनेको मेरो अभिनय र मैले निर्वाह गरेको भूमिकाले नै हो ।’ तर, चलचित्र राम्रो भएको खण्डमा प्लस पोइन्ट जरुर हुने उनको भनाई छ ।
लभ डायरिज रिलिज पूर्व नै रविनालाई धेरै चलचित्रबाट अफर आएका थिए । तर, डेब्यु चलचित्र लभ डायरिज नै होस् भन्ने सोचेर उनले अफर आएका चलचित्र नकारिन । त्यसमा अनमोल केसी स्टारर चलचित्र ‘क्याप्टेन’ पनि परेको थियो । ती चलचित्रहरु नगरेकोमा रुविनालाई कुनै गुनासो भने छैन ।
अहिले पनि रुविना आफूलाई केही चलचित्रबाट अफर आइरहेको बताउँछिन् । ‘लभ डायरिज रिलिज पछि मलाई विभिन्न चलचित्रबाट अफर आइरहेको छ । तर म बिरामी भएर भेट्न पाएको छैन’, रुविनाले भनिन्, ‘अब भने राम्रो टिम पाएको खण्डमा चलचित्रमा काम गर्नेछु ।’
रुविनालाई यस्तै भूमिका पाए गर्छु भन्ने छैन । राम्रो टिम पाए चलचित्र क्षेत्रलाई थप बुझ्नको लागि काम गर्न तयार छिन् ।
बिबाहले करिअर असर गर्ला ?
रुविना थापा बिबाहित हुन् । उनले लभ डायरिज रिलिज पूर्व नै बिबाह गरेकी हुन् । सुरु सुरुमा आफ्नो बिबाह लुकाउन खोजेपनि पछि उनले आफू बिबाहित भएको खुलेर बोलिन ।
बिबाह पछि नायिकाहरुको करिअर पूर्णविराम लागेको उदाहरणहरु धेरै देखिएका छन् । रुविनाले त करिअर सुरु हुनसाथ बिबाह गरेकी छिन् । तर, बिबाहले आफ्नो करिअरमा कुनै असर नगर्ने उनले बताइन् ।
उनी भन्छिन्, ‘बिबाह संगम हो, बन्धन होइन । यदि परिवार सहयोगी छ भने करिअरलाई कुनै असर गर्दैन । मैले सहयोगी परिवार पाएको छु । त्यसैले असर गर्छ जस्तो लाग्दैन ।’
रुविना निरन्तर रुपमा चलचित्र क्षेत्रमा नै रहेर काम गर्ने सोचमा छिन् । डेब्यु चलचित्रले पाएको मायालाई उर्जाको रुपमा लिएकी छिन् । आगमी चलचित्रबाट थप दर्शकको मन जित्ने दौडमा छिन्, रुविना ।
हेमाले रुँदै भनिन्, ‘मलाई आठ ‘ला’ठी प्र’हा’र गर्ने प्रहरीलाई का’रबा’ही हुनुपर्छ, नभए राष्ट्रपति भवन अगाडि ध’र्ना बस्छु’ (भिडियो हेर्नुहोस्)
No Comments on हेमाले रुँदै भनिन्, ‘मलाई आठ ‘ला’ठी प्र’हा’र गर्ने प्रहरीलाई का’रबा’ही हुनुपर्छ, नभए राष्ट्रपति भवन अगाडि ध’र्ना बस्छु’ (भिडियो हेर्नुहोस्)
काठमाडौँ– केही महिनायता हेमा श्रेष्ठ सामाजिक सञ्‍जालहरुमा भाइरल छिन्। काखमा बच्चा च्यापेर न्यायका लागि प्रहरी कार्यालयमा भौतारिरहेको हेमाका भिडियो यूट्युबमा बढी खोजिएका सामग्रीहरुमध्ये पर्छन्।
संखुवासभाको तत्कालिन जलजला गाविस स्थायी घर भएकी ३३ वर्षीया हेमा अदालतबाट फ‍ैसला हुँदासमेत श्रीमानबाट न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएकी छिन्। हेमाको केही वर्षअघि संखुवासभाको जलजलाकै दोर्छो शेर्पासँग विवाह भएको थियो।
विवाहपछि उनीहरुबाट एउटा छोरी जन्मियो। तर शेर्पाले उक्त छोरी आफ्नो नभएको दावी गरेपछि हेमा अदालतको शरण पुगिन्। अदालतले छोरी शेर्पाकै भएको भन्दै नाता कायम गरिदियो। त्यतिमात्र होइन, मानाचामल भराउने आदेश पनि दियो। तर त्यसपछि शेर्पा सम्पर्क बाहिर भए। श्रीमानले जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै हेमा अहिले न्यायका लागि लडिरहेकी छिन्।
प्रहरीले शेर्पाको खोजि भइरहेको बताएपनि हेमाले चित्त बुझ्दो जवाफ भेटिरहेकी छैनन्।
‘स्थिति नियन्त्रणमा लिन हामीबाट अलिक बढी बल प्रयोग भएकै हो। मैले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छु। प्रहरी निरीक्षक पौडेलसँग स्पष्टिकरण सोध्ने पनि काम हुन्छ। त्यसपछि आवश्यक कारबाहीका विषयमा अगाडि बढ्ने छौँ ‘, एसएसपी राईले भने।
हेमासहित केही महिला र युट्युबरलाई लिएर आफूलाई पूर्व जर्नेल खत्रीकी प्रेमिका दावी गर्ने माला शाह बिहीबार भैसेपाटीस्थित खत्रीको घरमा पुगेकी थिइन्। त्यतिबेला खत्रीको घरमा उनकी छोरी मात्र रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यस्तै हेमाले यो घटनामा आफू दोषी ठहर भएमा जस्तोसुकै कारबाही भोग्न पनि तयार रेहेकी उनले बताइन् । अहिले आफू बोल्न सक्ने भएपनि अवस्था भने ग’म्भीर भएको बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘दुवै खुट्टाको पछाडिको भागमा नि”ल डा”म छ । देब्रे खुट्टालाई चलाउनै हुँदैन । प्रहरी चौकीमा पुगेपछि मलाई किन ‘कु’ट्नु’भयो । मलाई उपचार गर्नुहोस् भन्दा प्रहरीले मलाई केही प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । घर जानुस् भनेर पठाए ।’
उनले ग्रीन सिटी अस्पताल बसुन्धारामा उपचार गराएकी बताउँदै भनिन्, ‘मेरो दुई/दुई वटा बच्चा छन् । अस्पतालमा बच्चालाई समातेर बस्न सकिन । त्यसैले एक रात अस्पतालमा बसेर आज विहान मात्रै कोठा आएर आराम गरिरहेको छु । अहिलेपनि घाउको ड्रेसिङ गरिरहेकी छु ।’
यसैबीच उनले आफू श्रीमान पीडित भएको बताउँदै भनिन्, ‘म श्रीमान पीडित महिला हुँ । मेरो श्रीमान कपनको डन हो । आफ्नो छोरा÷छोरी लागि उनको खोजी गरिरहेकी छु ।’
उनले फेरि भनिन्, ‘मिडियाकै अगाडि मलाई ला’ठी प्र”हा’र गर्ने प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । मलाई न्याय दिनुपर्छ । यदि कारबाही गरिएन भने म राष्ट्रपति भवन अगाडि गएर धर्ना बस्नेछु । किन भने राष्ट्रपति पनि महिला नै हुनुहुन्छ ।’
बर्दी लगाउँदैमा मान्छे यति अमा’नवीय कसरी बन्न सक्छ ? ओली राजमा सबै छोटे राजा : बाबुराम भट्टराई
No Comments on बर्दी लगाउँदैमा मान्छे यति अमा’नवीय कसरी बन्न सक्छ ? ओली राजमा सबै छोटे राजा : बाबुराम भट्टराई
पुर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघिय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले प्रहरीले काखमा बच्चा बोकेकी हेमा श्रेष्ठमाथी लाठी चलाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । बिहिबार ललितपुरको एक घरमा बच्चा बोकेकी महिलालाई धकेल्दै प्रहरीले पछाडीबाट लाठी चार्ज गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला भाईरल भईरहेको छ।
उक्त घटनाको अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुट, ट्वीटर लगाएतकोमा प्रहरीको उक्त कार्यको सबत्र बिरोध भईरहेको छ भने प्रहरीले पनि उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्ने बताएको छ । बिहिबार ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित नेपाली सेनाका पुर्वजर्नेल हेम खत्रिको घरअगाडी केहि महिला जम्मा भएका थिए ।
एक महिलाले खत्रिसंग आफ्नो सम्बन्ध रहेको तर उनले आफुलाई श्रीमती नस्वीकारेको भन्दै अन्य महिलाको साथमा त्यँहा गएकी थिइन् । आफ्नो घर बाहिर महिलाहरु भेला भएको दखेपछी खत्रिले प्रहरीलाई अबर गरेको र केहि समयमा प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीका प्रहरी खत्रिको घरमा पुगेको थियो । भेला भएकालाई नियन्त्रण गर्न पुरुष प्रहरी गएको बताइएको छ ।
प्रहरीले त्यहाँबाट महिलाहरुलाई हटाउन खोजेको र उनिहरुले नमानेपछी बल प्रयोग गरेको बताएको छ । त्यहि क्रममा इन्सपेक्टर देवीप्रसाद पौडेलले पनि लाठी चलाएका थिए । उनले एक बच्चा बोकेकी महिला हेमा श्रेष्ठमाथी लाठी चलाएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएको छ । उक्त घटनाप्रति डा भट्टराई भावुक हुँदै घटनाको निन्दा गरेका छन् । उनले आफ्नो ट्वीटमा यस्तो लेखेका छन्ः
“मान्छेले बर्दी लगाउँदैमा यति अमानवीय कसरी बन्न सक्छ आमाले गल्ती गरिहोलिन्, तर त्यो अबोध शिशुको के गल्ती थियो र त्यो शिशु आमाको हातबाट खसेर टाउकोमा चोट लागेको भएरु गिरफ्तार गर्नै परे समातेर भ्यानमा हाल्न सकिन्नथ्यो ओलीराजमा सबै छोटे राजा
अमेरिकाको कामदार भिसा ! मार्च १ बाट अनलाईन दर्ता हुँदै
No Comments on अमेरिकाको कामदार भिसा ! मार्च १ बाट अनलाईन दर्ता हुँदै
काठमाडौं-अमेरिकाले कामदार भिसा खुल्ला गरेको छ । एचवान बी भिसा खुल्ला भएसँगै यसको अनलाइन दर्ता पनि सुरु हुने भएको छ । अनलाइनमार्फत दर्ता अवधि मार्च १ को दिउँसो १२ बजेबाट सुरु हुने युएससीआईएसले घोषणा गरेको छ ।
हरेक दर्ताका लागि युएससीआईएसले कन्फर्मेशन नम्बर उपलब्ध गराउनेछ । उक्त नम्बर रजिस्ट्रेशन ट्रयाक गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । तर उक्त नम्बर केस नम्बर नभएका कारण युएससीआईएसको केस स्टाटस हेर्न भने प्रयोग हुनेछैन ।
काठमाडौं– इटालीबाट फ्रान्स हुँदै पोर्चुगल हिडेका ३ नेपालीमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएको छ ।
कोरोनाको लक्ष्यण देखिएपछि उनिहरुलाई फ्रान्समै रोकेर क्वारेन्टाइनका लागि परिक्षण शुरु गरिएको छ।अस्पतालमा गरिएको प्रारम्भिक परिक्षण रिपोर्टमा उनीहरुमा भाइरस पुष्टि भएको छैन ।
यद्यपी पूरा रिपोर्टपछि मात्रै कोरोना हो या हैन भन्ने थाहा हुने फ्रान्सेली स्वास्थ्य अधिकारीहरुलाई उदृत गर्नै त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ ।
इटाली बाट अवैध तरिकाले फ्रान्सको पेर्पिग्न्यों शहर प्रवेश गरेका ३ जना नेपालीहरुको अहिलेसम्म परिचय खुलाईएको छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस्-अमेरिकाले कामदार भिसा खुल्ला गरेको छ । एचवान बी भिसा खुल्ला भएसँगै यसको अनलाइन दर्ता पनि सुरु हुने भएको छ । अनलाइनमार्फत दर्ता अवधि मार्च १ को दिउँसो १२ बजेबाट सुरु हुने युएससीआईएसले घोषणा गरेको छ ।
नायिका:- प्रियन्का कार्की लाई शुभ चिन्तकहरुको भि’ड निय’न्त्रण गर्न ,से’क्यु’रिटी गार्ड नै बोलाउनु प’र्यो (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
No Comments on नायिका:- प्रियन्का कार्की लाई शुभ चिन्तकहरुको भि’ड निय’न्त्रण गर्न ,से’क्यु’रिटी गार्ड नै बोलाउनु प’र्यो (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
व्यस्त नायिका प्रियंका कार्कीले आफ्ना प्रेमी आयुष्मान देशराज जोशीसँग बिबाह गरेकी छिन् । उनले बिहीबार जिल्ला अदालत ललितपुरमा कोर्ट म्यारिज गरेकी हुन् ।सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा ब्याच्लर पार्टीदेखि मेहेन्दीसम्मको फोटोहरु भाइरल भइरहँदा बिहीबार यो जोडीले कोर्ट म्यारिज गरेको हो ।
उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत कोर्ट म्यारिज भएको जनाएका छन् । दुबैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा बिबाहको फोटो राख्दै ‘मिस्टर एण्ड मिसेज श्रीमान–श्रीमती) लेखेका छन् ।निकट व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा उनीहरुले एकअर्कालाई माला लगाइदिँदै कानुनी रुपमा बिहे गरेर बिबाह दर्ता गराएका थिए । यसअघि उनीहरुले फागुन १५ मा बिहे गर्ने भनिएपनि स्वरुप भने सार्वजनिक गरिएको थिएन
यो पनि नेपालमा काम गर्न अनुमति लिनेमा चिनियाँ ७० प्रतिशत
नेपालमा श्रमस्वीकृति लिएर काम गर्नेमा सबैभन्दा धेरै चिनियाँ नागरिक रहेका छन् ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो छ महिनाको अवधिमा ६२६ विदेशी नागरिकले नयाँ श्रम इजाजत लिएका छन् भने ५७१ जनाले श्रम इजाजत नवीकरण
गराएका छन् ।जसको झण्डै ७० प्रतिशत निचियाँ नागरिक रहेको विभागले जनाएको छ ।चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा श्रम इजाजत र श्रम इजाजत नवीकरण गरेका १हजार १९७ जनामध्ये १९३ महिला छन् । सो अवधिमानयाँ श्रम इजाजत लिने महिलाको संख्या ९९ छ भने इजाजत नवीकरण गर्ने महिलाको संख्या ९४ रहेको विभागले जनाएको छ । नेपालमा काम गर्ने भारतीय नागरिकको संख्या निकै ठूलो भएपनि सबै भारतीयले श्रम इजाजत लिने गरेका छैनन् । गोरखापत्रमा यो खबर छ।
अब चन्द्रागिरिमा ७० वर्ष नाघेकालाई केबलकार सेवा निःशुल्क
No Comments on अब चन्द्रागिरिमा ७० वर्ष नाघेकालाई केबलकार सेवा निःशुल्क
ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानका लागि चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित चन्द्रागिरि केवलकारले सेवा लिने ७० वर्ष नाघेका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई केवलकार सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केबुलकारका अनुसार, बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैका लागि निर्माण गरिएको एकीकृत पर्यटकीय गन्तव्यमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको भ्रमणलाई उत्साहित बनाउने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको हो।
यो योजनाअन्र्तगतको सेवा लिन पर्यटकहरूले ज्येष्ठ नागरिकको परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजात टिकट काउन्टरमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा चन्द्रागिरि केबलकार चढ्न जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई निःशुल्क केबलकारको व्यवस्था कम्पनी व्यवस्थापनले यसअघि नै गरिसकेको छ।
त्यसका अतिरिक्त तीन फिटसम्म उचाइ भएका बालबालिकाहरूलाई पूर्णतः निःशुल्क केबलकार चढ्न पाउने व्यवस्था कम्पनी स्थापनासँगै गरिँदै आइएको छ । साथै केबलकारको शुल्कमा स्थानीय नागरिक र विद्यार्थीहरूलाई २५ प्रतिशत र शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कम्पनीले गर्दै आएको छ।
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्व बोकेको चन्द्रागिरि डाँडामा भालेश्वर महादेव मन्दिर, सत्तल, भ्यु टावर, चिल्ड्रेन पार्क, सेमिनार हल र रिर्सोटलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेर चन्द्रागिरि डाँडालाई एकीकृत पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिरहेको छ।
नेपाल आइडल सिजन ३ बाट बाहिरिए पछि रचनाले जज न्हु बज्राचार्यलाई किन यसो भनिन् ?
No Comments on नेपाल आइडल सिजन ३ बाट बाहिरिए पछि रचनाले जज न्हु बज्राचार्यलाई किन यसो भनिन् ?
काठमाडौँ – फ्रेन्चाइज सिङगिङ रियालिटी–सो नेपाल आइडल सिजन–३ मा यो साता रचना रिमाल बाहिरिएकी छिन् । तीन हप्तादेखि लगातार सबैभन्दा धेरै भोट पाउँदै आएकी रचनालाई यो हप्ता भने सबैभन्दा कम भोट आएपछि आइडलबाट बाहिरिएकी हुन् । चितवनका केविन ग्लान तामाङले सबैभन्दा धेरै भोट ल्याएका थिए ।
मौलिक स्वर भएकी प्रतिस्पर्धीको परिचय बनाएकी झापाकी रचनाका केही गीत पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । रचना बाहिरिएसँगै नेपाल आइडल सिजन–३ को टप–७ मा मेघा श्रेष्ठ, सज्जा चौलागाई, मुस्कान रानाभाँट, नेसन पुन मगर, किरणकुमार भुजेल, प्रविन बेडवाल र केभिन ग्लान तामाङ पुगेका छन् ।यो सिजनमा पनि न्ह्यू वज्राचार्य, कालीप्रसाद बाँस्कोटा र इन्दिरा जोशी निर्णायक रहेका छन् ।
हेर्नुस् रचना रिमालले लेखेको स्टाटस् :
समपुर्णमा नमस्कार ! नेपाल आइडल सिजन थ्रीमा आज देखि मेरो यात्रा सकिएको छ । सर्वप्रथम त उत्कृष्ट ७ हुँदै अर्को चरणमा प्रबेश गर्नु हुने मलाई अत्यन्तै माया गर्नु हुने प्रतिभाशाली दाइ दिदीहरुलाई हार्दिक बधाई ।
फरक ठाउ, फरक परिवेश अनि फरक कोखबाट जन्मिएका हामी अब एउटै परिवार भएका छौ । तपाईंहरुको माया, साथ, सहयोग र शिक्षालाई म कहिले भुल्न सक्ने छैन । यो यात्रामा हामिले बिताएका पल र यो समय जिवनभर मुटुमा साचेर राख्ने छु ।
तिनै जना निर्णायक ज्यु प्रति म संग आभार प्रकट गर्ने शव्दनै छैन, नेपाली संगीतका धरोहर न्हु सरले मेरो घरमै आएर मलाई सुनी दिनु भएको दिन देखि आज सम्मको यात्रामा हजुरहरुले बढाउनु भएको हौशला, दिनु भएको ज्ञान र देखाउनु भएको बाटो मेरालागि मार्गदर्शक हुनेछ्न । मलाई प्रस्तुतिकालागि तयार पार्नु हुने मेन्टर, प्रस्तोता दाइ दिदी र आइडलका सम्पुर्ण सदस्य ज्यु हरु प्रती सदैब कृतज्ञ रहनेछु ।
नेपाल आइडल र एपि वान टेलिभिजनलाई मुरि मुरि धन्यवाद छ, झापाको एउटा कुनामा गित संगीत सुन्न र गाउन मन पराउने एउटा अबोध फुच्चिलाई यति ठूलो प्ल्याटफर्ममा उभाई दिनु भयो । र विशेष रुपमा हजुरहरु सबैलाई विशेष धन्यवाद, विशेष माया र विशेष आभार ! मैले कहिले महसुस पनि गरेकि थिईन कि म यति धेरै भाग्यमानी रहेछु ।
कार्यक्रमको सुरुवाती दिन देखि नै तपाईंहरु ले दिनु भएको माया, साथ र हौसलाको लागि म संग धन्यवाद भन्ने कुनै शव्दनै छैन । आफ्नो घर गाउबाट बिरलै बाहिर निस्केकी , डर र आत्मविश्वासको अभावमा कामी रहेकी एउटा फुच्चीलाई तपाईंहरुले जुन साथ, सहयोग र हौशला दिएर लगातार तीन पटक सर्बाधिक भोट दिएर मलाई आइडलमा जसरी बलियो बनाएर राख्नु भयो त्यसकोलागी मैले जति धन्यवाद भनेपनी कम नै हुन्छ । देश देखि बिदेशका विभिन्न ठाउँबाट जसरी हजुरहरुको सहयोग पाए त्यसको ऋणि म जीवन भर रहने छु ।
मेरो गृह जिल्ला झापाबाट मलाई जुन किसिमको सहयोग भयो त्यसको लागि म आफ्नो जिल्ला र समपुर्ण झापालीहरु प्रती कृतज्ञ छु । मलाई यहाँ सम्म ल्याउन सहयोग गर्ने स्थानीय सम्पुर्ण गुरु, आफन्त, दाजु भाइ, दिदी बहिनी, साथीभाइ र संघ संस्थालाई एक मुस्ठ आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । हजुरहरु समपुर्ण प्रति माफी पनि माग्न चाहान्छु कि कार्यक्रममा मैले आफ्नो क्षमता अनुसारको प्रस्तुती दिन सकिन ।
धेरै कुरा सिक्न पाएको छु, अझै सिक्न बाकी छ, आगामी दिनमा आत्मविश्वास उच्च राख्दै संगीत साधनामा अगाडी बढी राख्ने छु । हजुर हरुको मायाको बदला कुनै दिन हजुरहरुलाई गर्ब गर्ने मौका दिन सके भने आफुलाई सफल सम्झिने छु । हिजो सम्म मेरो परिवारको मात्र थिए, आजबाट तपाईंहरु सबैकि “रचना” भएकी छु, यो माया कहिले कम नहोस् ।धन्यवाद धेरै माया ।
आजको राशिफल : वि.सं.२०७६ साल फाल्गुन १७ गते । शनिबार । ईश्वी सन् २०२० फेब्रुवरी २९ तारिख
No Comments on आजको राशिफल : वि.सं.२०७६ साल फाल्गुन १७ गते । शनिबार । ईश्वी सन् २०२० फेब्रुवरी २९ तारिख
वि.सं.२०७६ साल फाल्गुन १७ गते । शनिबार । ईश्वी सन् २०२० फेब्रुवरी २९ तारिख । नेपाल संवत् ११४० । परिधावी संवत्सर । उत्तरायन । शिशिर ऋतु । श्रीशाके १९४१ । फाल्गुन शुक्लपक्ष । तिथि– षष्ठी,अहोरात्र । नक्षत्र– भरुणी,५२ घडी २२ पला,रातको ०३ बजेर २८ मिनेट उप्रान्त कृतिका । योग– ब्रम्ह,०७ घडी ५९ पला,बिहान ०९ बजेर ४३ मिनेट उप्रान्त ऐन्द्र । करण– कौलव,बेलुकी ०६ बजेर ४३ मिनेट उप्रान्त तैतिल । आनन्दादिमा–ध्वांक्ष योग । चन्द्रराशि–मेष । काठमाडौंमा सूर्योदय ०६ बजेर ३१ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ०२ मिनेट । दिनमान २८ घडी ४८ पला ।
व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन चालिएका कदमहरु सफल रुपमा सम्पन्न हुनेछन् । पढाई लेखाईमा मन जाने हुनाले नतिजा आफ्नै पक्षमा पार्न सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन रहने हुदा पद प्राप्तीको योग रहेकेछ । आफन्त तथा सहयोगीको साथ पाईने हुनाले कामहरु गर्न जोस जागर बढ्नेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने
गैर सरकारि सस्था तथा बिदेशि लगानिबाट सञ्चालित सस्थाहरुमा सहभागि भई काम गर्ने अवसर आउँनेछ । लामो यात्राको अभिक सम्भावना रहेको छ भने बिदेशी बस्तुको व्यापार व्यावसायबाट भनेजस्तो आम्दानि गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आई उपचार खर्च बढ्न सक्छ ध्यान लिनुहोला । पढाई लेखाईमा सफलता प्राप्त गर्न अलि बढिनै समय लगानि गर्नुपर्नेछ ।
परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्न सक्दा मनग्गे आम्दानि हुनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले समस्याहरु समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । सरकारि क्षेत्रमा तपाईको राम्रो उपश्थिती रहनेछ भने समयमा काम बन्ने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । आफन्त तथा अग्रज सँगको भेटघाटले महत्वपुर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ ।
मुद्दा मामिला तथा न्यायलयबाट हुँने निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । वादबिवाद तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई सजिलै हराउँन सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने तथा थप लगानि गर्ने बाताबरण बनेर जानेछ । माया प्रेम तथा दाम्पत्य जिवनको गाठो झन् गसिलो भएर जानेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि पुराना समस्या भए समाधान भएर जानेछ । पढाई लेखाईमा सोचेजस्तै प्रगति गर्न सकिनेछ ।
थोरै समय र सानो लगानि गरी शुरु गरिने व्यावसायबाट भनेजस्तो आम्दानि गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा कुटुम्ब सँग भेटि नया कामको योजना बुन्न सकिनेछ । पारिवारिक सभा समारोहमा सहभागि भई स्वादिष्ट भोजनका साथ रम्न सकिनेछ । प्रणय सम्बन्धमा सुधार आउनुको साथै नया ठाउबाट प्रेम प्रस्ताब आउने प्रवल सम्भावना रहेकोछ । राजनिति तथा समाजसेवामा समय खर्चिनेहरुले अलि बढि मेहनेत गरे जनताको मन जित्न सकिनेछ ।तपाईको दिन शुभ रहोस् ।